အရေပြားဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများအရ ကျန်းမာသော အရေပြားဖြစ်ရန် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း
Bioderma သည် NAOS ၏ အခြေခံဇီဝဂေဟသဘောတရားပေါ်မူတည်၍ တည်ရှိထားသော brand ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည့်အလျောက် အရေပြား‌‌‌‌ဂေဟစနစ်ကို ကောင်းစွာသိရှိနားလည်ပြီး ကျန်းမာသော အရေပြားဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းမှုများ ပြုလုပ်ပေးသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိန်းသိမ်းထားပေးသည်။ www.naos.com
မူပိုင် မြင့်မားစွာသန့်စင်ထားသောရေ၊ အရေပြားကို သက်သာစေပြီး အညစ်အကြေးနှင့် မိတ်ကပ်အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေသည်။
ယားယံမှု ချက်ခြင်းသက်သာစေခြင်း နှင့် အာဟာရဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း
အရေပြား၏ သဘာဝရေဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသော micellar သန့်စင်ဂျယ်လ်
ဆပ်ပြာပါဝင်မှုမရှိပဲ အရေပြားကို ထိန်းသိမ်းပေးသော နူးညံ့စွာသန့်စင်ပေးသည့် ဂျယ်လ်
ရေကဲ့သို့ပေါ့ပါးပြီး လိမ်းပြီးပြီးချင်း ခြောက်သွေ့သွားသော နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို မြင့်မားစွာ ကာကွယ်ပေးသော နေရောင်ကာခရင်မ်
သင့်အရေပြားဟာ မကြာခဏနီမြန်းတတ်ပါသည်။ သေးငယ်သော သွေးကြောမျှင်များ တွေ့ရသည်။ သင့်အရေပြား အရေခွံကွာကျခြင်း၊ တင်းရင်းနေခြင်း အစရှိသဖြင့် ထိခိုက်လွယ်သော အသားအရေ၏ တုံ့ပြန်မှုများကို အမျိုးမျိုးတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ BIODERMA အနေဖြင့် ရောဂါလက္ခဏာကို စောင့်ကြည့်ပြီး ထိုသို့ဖြစ်စေသော အဓိက အကြောင်းအရင်းကို ဖော်ထုတ်ခြင်းက မှန်ကန်သောထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အရေးကြီးသည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။
ကလေးငယ်လေးတွေ၏ အရေပြားက အရမ်းနူးညံ့လို့ အထူးထုတ်လုပ်ထားသည့် သန့်စင်မှုနဲ့ ဂရုပြုထိန်းသိမ်းမှု ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သေးခံလောင်တာ၊ ပါးစပ်တဝိုက်မှာ ယားယံနီမြန်းတာ၊ ဉီးရေပြား အဖတ်လံတာ၊ မျက်နှာ သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ခြောက်သွေ့တာကို ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်မလဲ? ကျွန်‌တော်တို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပါ !
သင်၏အနီးအနားရှိ ဆေးဆိုင်၊ စတိုးဆိုင်များ မှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ထုတ်ကုန်များအ‌ကြောင်း ကြည့်ရှုရန်
E-partner များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏
ကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ထုတ်ကုန်များအ‌ကြောင်း ကြည့်ရှုရန်